अन्तरजातीय विवाह गर्ने यो जोडीलाई गाउँलेले ‘गोबर खाने’ स’जाय सुनाएपछि…! – " सुलभ खबर "
अन्तरजातीय विवाह गर्ने यो जोडीलाई गाउँलेले ‘गोबर खाने’ स’जाय सुनाएपछि…!
एजेन्सी, २६ माघ । अन्तरजातीय विवाह गरेका एक जोडीलाई स’जायस्वरुप गाउँलेहरूले गोबर तथा गोमुत्र सेवन गर्ने आदेश दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यदि त्यसो नगरे आठ लाख रुपैयाँ ज’रिवाना तिर्ने विकल्प दिइयो ।
तर, समयमै पुलिस पुगेपछि उक्त नवविवाहित दम्पत्ति थप अपमानित हुनबाट बचेका छन् । पुलिसले यस बिषयमा ६ जनाविरुद्ध कारबाही थालेको छ ।गाउँलेहरूले अन्तरजातीय विवाहलाई अ’पराध ठहर्‍याँउदै स’जाय सुनाएका थिए । भारतको झाँसी प्रेमनगरका भूपेश यादव र आस्था जैनले पाँच वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए ।
भूपेशका अनुसार, दुवै परिवारको सहमतिमा विवाह भए पनि गाउँलेहरू उक्त विवाहको विपक्षमा थिए । उनीहरूलाई समाजबाट बहिस्कार गरिँदै आएको थियो । हालै भएको भूपेशकी बहिनीको विवाहमा गाउँलेहरू सामेल भएनन् । ग्राम पञ्चायतले भन्यो, भूपेशकी पत्नीले गोबर सेवन गरेको शर्तमा बहिस्कारको कारबाही फिर्ता लिन सकिन्छ। अन्यथा, पाँच लाख जरिवाना तिर्नू !
‘हामीले दुवै शर्त मानेनौं ‘, भूपेशले भने । उक्त निर्णयविरुद्ध भूपेशले जिल्लामा लिखित उ’जुरी दिएपछि घ’टना प्रकाशमा आएको हो । गभर्नर शिवसहाय अवस्थीले ‘घ’टनाबारे छानबीन भइरहेको, केहीमाथि का’रबाही थालिएको र भूपेशका दम्पत्तिलाई सुरक्षा प्रदान गरिएको’ जानकारी दिए ।भूपेशका श्रीमान-श्रीमतीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण गाउँलेहरूले पाँच वर्षदेखि प्रताडित गर्दै आएका थिए ।